Angel Fire, New Mexico, i-United States
U-90% wezivakashi zakamuva unikeze u-Evolve izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
** Sicela uqaphele ukuthi kunamakhamera okuvikela angaphandle angu-2, angabheki noma yiziphi izikhala zangaphakathi **
Zizwa ubuhle beNew Mexico futhi uhlale kule ndlu eqashisayo ye-Angel Fire. Leli khaya elisanda kulungiswa elinamagumbi okulala angu-4, obhavu abangu-3 linikeza izivakashi ezingu-14 ubhavu oshisayo, i-sauna nokubukwa kwentaba amakhilomitha angu-8 ukusuka e-Angel Fire Resort. Njengoba kunezivakashi eziningi eziseduze, le ndlu iyindawo ekahle yokubaleka kwakho okulandelayo!
I-Master Bedroom: I-King Bed | Igumbi lokulala 2: Umbhede Wendlovukazi, 2 Amawele | Igumbi lokulala 3: Umbhede Wendlovukazi, 2 Amawele | Igumbi Lokulala 4 (Igumbi Lemidiya): Imibhede ye-Twin-over-Twin Bunk
Uphahla oluphakeme olunamapulangwe kanye nemishayo yokhuni esobala ikunxusa ukuba ukhululeke kuleli pharadesi lezintaba. Uzobe uzungezwe amahektha ayi-5 angasese anezilwane zasendle njengomakhelwane bakho abaseduze, okuvumela le ndawo yokuhlala ethokomele ukuthi ibe yindawo efanelekile yokubaleka komndeni wakho olandelayo.
Uphahla lwamapulangwe emvelo lunwebeka ngaphezu kwegumbi lokuhlala elikhulu, lapho amasofa anethezekile anikeza indawo yokuphumula. Buyela emuva ukuze ubukele imuvi ku-TV yesathelayithi yesikrini esiyisicaba, futhi uhlale unethezekile ngokuphonsa olunye ugodo emlilweni eziko elivutha izinkuni.
Bheka isitayela sendabuko saseNew Mexico ngezindonga ze-stucco ezibushelelezi kanye neminyango eyindilinga njengoba udlula uya endaweni yokudlela. Hlanganani eduze kwetafula labantu abangu-10 noma endaweni yokuphuzela utshwala yabantu abangu-4 ukuze ujabulele ukudla okulungiselelwe ekhishini elihlome ngokuphelele.
Uma ungathanda ukuchitha isikhathi sakho ungaphandle, phonsa ama-burgers ku-grill yegesi futhi uwajabulele etafuleni levulandi. Qhubeka ucwila ekubukeni okusuka kubhavu oshisayo, noma uzulazule kusihlwa endaweni ethe thuthu, lapho ungase uhlangane nezilwane zasendle zasendaweni!
Uma usulungele ukulala, ngena kunoma yiliphi igumbi lokulala elibekwe kahle ukuze ulale kamnandi ebusuku. Ekuseni, phuza ikhofi lakho kuvulandi wangasese wekamelo lokulala elikhulu, noma egumbini elishisayo ukuze uqale olunye usuku olujabulisayo.
4.73(30 okushiwo abanye)
Le ndawo yokubalekela yaseNew Mexico itholakala endaweni efanele ukuze usebenzise isikhathi sakho ngokugcwele kulezi zintaba ezinhle. I-Angel Fire Resort izijabulisa ngohambo lonyaka wonke olusukela ekushushuluzeni eqhweni, eqhweni, e-tubing nase-sledding ukuya ekugibeleni izintaba, umugqa we-zip, igalofu nokuqwala izintaba.
I-Monte Verde Lake ephakelwa entwasahlobo iyiphupho labadobi. Lapho, uzothola i-rainbow lake trout, izinto zokudoba eziqashiswayo, kanye nezikebhe ezitholakalayo. Hlola indawo ezungezile emangalisayo ngedrayivu ku-83-mile Enchanted Circle National Scenic Byway. Qiniseka ukuthi uyema e-Taos ukuze uthole ukushushuluza okusezingeni lomhlaba, umlando ohlonishwayo kanye nesigcawu esiphumelelayo sokupheka.
Ngomlando ocebile, idolobha elithandekayo kanye namathuba amaningi okungcebeleka, idolobhana eliseduze le-Red River lenza uhambo losuku oluhle. Shaya emithambekeni e-Red River Ski & Summer Area, thenga ku-Main Street ukuze uthole isikhumbuzo esihle esivela kungcweti wendawo futhi uqashe i-Jeep ukuze uthole uhambo lwangaphandle komgwaqo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Angel Fire namaphethelo